KA-HORTAGGA, HABKA IYO HABABKA CAYAYAANKA - CANAB
Sida looga hortago iyo la dagaallama cayayaanka canab
Canab, guud ahaan, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid adag oo sahlan in lagu beero warshad. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira cayayaanka iyo cudurrada halis u ah isaga. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo horeyba dhibaatooyinka suurtagalka ah, oo ay yaqaanaan cayayaanka ugu caansan.
Ma taqaanaa? Daraasad cilmi baaris ah oo ay sameeyeen saynisyahannadu waxay muujinayaan in dalagyada sabiibta ee ka soo jeeda cayayaanka la yareeyo sanadkiiba by ugu yaraan hal saddexaad, iyo haddii ay dhacdo in ay ku fashilmaan in ay qaadaan tallaabooyin haboon si looga hortago cudurada, khasaaruhu wuxuu gaari karaa nuska dalagga. Tani, dabcan, waxay ku saabsan beeraha canabka ah, inta lagu jiro xiliga xagaaga ee daryeelka saxda ah ee canab si buuxda u baabbi'in karaa ma aha oo kaliya goosashada, laakiin sidoo kale geedka laftiisa.
Cadaadiska canabkiisa cayayaanka iyo cudurada si toos ah waxay ku xiran yihiin noocyada kala duwan ee dalagga, si kastaba ha ahaatee, cadawga ugu weyn ee dhammaan noocyada canabka ah waa mid caadi ah, farqiga u dhexeeyaa kaliya heerka cabbirka calaamadaha iyo muddada daaweynta.
Grauba - caleemo yaryar oo cuno caleemo, iyo sidoo kale dhir kale oo badan. Muuqaal ahaan, cayayaankaasi waxay u egyihiin sidii loo yareeyey cabbirka 0.5 cm ee baranbarada. Iyadoo bilawga guga, wuxuu cunaa caleemaha yar yar iyo caleemaha canabka ah, taasoo keenta dharbaaxo culus oo geedka, ka dibna wuxuu ku daboolaa dhabarka caleemaha caafimaad leh laga bilaabo hal ilaa saddex digaagadood. Dirxiga dillaacsan ee isla markiiba wuxuu bilaabaa inuu cuno cagaarka canab, taasoo keenaysa in dhirta ay waxyeelo ka soo gaarto.
Hawlgal wax ku ool ah oo halgan ah oo leh burcad canab ah waa "karbofos" ama daroogooyinka kale ee kiimikada ah ee ficilka la midka ah, kuwaas oo lagu buufinayo burooyinkeeda canab oo la rusheeyey. Nidaamka waa in lagu celiyaa iyada oo godadka cusubi ay muuqdaan caleemaha, iyagoo tilmaamaya waxqabadka cayayaanku.
Miraha macdanta macaan
Cayayaankaasi waa midab yar oo casaan leh oo la arki karo indhaha qaawan, taas oo bilaabmaysa xilliga duulista caleemaha yar yar ee geedka canabka ah ee guga dambe, iyo, sida boodada canabka ah, waxay dhirtaa ukunta xagga dambe ee caleenta warshad.
"Makhaayadaha" caleenta leh caleemo qaas ah oo ay ka buuxaan waxqabadkooda asaasiga ah, taas oo ka dhalatey caleemo lumo midabkiisa, lumo iyo baaba'o.
Maadinta khafiifinta waxay sababtaa waxyeelo weyn oo geedka, dalaggu wuxuu yareeyaa, iyo berry ayaa lumiya tayada. Qalabka aan fiicnayn ee cayayaanka waa xaqiiqda ah in inta lagu jiro xilligaas aysan bixineynin hal, laakiin laba jiil oo farac ah.
Dagaalka iyada oo aboorka macdanta inta lagu jiro xilliga qaboobaha, marka uusan weli bilaabin in uu cuno dhirta, waxa la xadidan karaa qodidda xagaaga xagaaga iyo burburinta haraadiga dhirta oo cayayaanka la seexan karo.
Si kastaba ha noqotee, haddii guga cirifka dhaadheer ee hore ("miino") laga helay caleemaha, qaabab badan oo xagjir ah ayaa loo baahan doonaa. Sida boodada canabka ah, aboorka macdanta ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso sunta cayayaanka ee canabka.
Ka hortagga cayayaanka, diyaarinta oo leh faleebo faleebo ah oo cagaarsho leh, laakiin waa in si taxadar leh loo daaweeyaa, sababtoo ah, marka hore, walaxtu waa wax aad u dhib badan oo aan aboor ku dhicin, laakiin sidoo kale aadanaha, marka labaadna, mole macdanka si deg deg ah ayey u helaan sida sunta.
Haddii infekshanka uusan ahayn mid aad u culus, waxaad isku dayi kartaa inaad sameyso kiimiko gaar ah oo canab ah. Sidaa darteed, ukunta cayayaanka ayaa la burburiyaa iyadoo la adeegsanayo alaabooyin ay ku jiraan paraffin.
Intaas ka sokow, ka hor inta aadan kuusin canabkiina sunta, waxaad isku dayi kartaa inaad dalbato macnaheedu: si taxadar leh u fiiri geedka iyo ka saarto caleemaha cudurka qaba, iyadoo la adeegsanayo filimooyin kala duwan iyo noocyada kale ee cayayaan qaangaar ah.
Suufka canabka ah
Suufka canabka ah - kaneecada cayayaanka ah ee ay adag tahay in laga takhaluso. Siyaabo badan, waa mudnaanta ay leedahay caddaan cad oo hoos u dhac ah, kaas oo cayayaanka cayayaanka laftiisa laftiisa, ka ilaalinta saamaynta sunta iyo weerarka dabiiciga ah. Marka lagu lifaaqo caleen ama laan caleen dhalinyaro ah, barkinta ayaa si joogta ah u nuugi doonta casiirka ka baxsan nolosheeda oo dhan iyada oo gacan ka heleysa proboscis gaar ah. Natiijo ahaan, dhirta ayaa daciif ah oo lumisa caabbinta cudurada, dhalidda dhalidda.
Laga soo bilaabo ukunta la cayimay cayayaanka (waxaa jiri kara in ka badan laba kun oo iyaga ah sanadkiiba) dhallinyaradu waa dillaac, oo maalmaha ugu horreeya ee noloshu aanay u adkeynin saamaynta kiimikada, sidaas darteed, waxtarka cayayaanka tooska ah wuxuu si toos ah ugu xiran yahay daryeelka beerta.
Burburin barkin waxaa laga dhigi karaa mid farsamo ahaan ah iyada oo laga jarayo xiniinyaha iyo dadka qaangaarka leh buraash aan caadi ahayn. Xaalado badan oo kakan, isticmaal "Nitrafen" ama "Dimethoat" (ugu horeyn waxaa loo isticmaalaa guga hore, tan labaad - ka dib muuqaalka caleemaha).
Kufsi Qoyan Qoyan
Munaasabada yaryar, oo magaceeda ka soo qaatay habka loo riixo gawaarida: cayayaanka marxaladdan horumarintu ma laha lugaha caloosheeda, sidaa daraadeed waxay u guuraan, qafiifiyaan qiiq iyo mar labaad, sida haddii ay qiyaasaan masaafada u dhexeysa. Ujeedadu waa fikrad la soo dhaafay, oo u dhiganta dhererka suulka ilaa farta indhaha ee qof ku dul yaal dusha sare ee qaabka albaabka.
Rinjiyeyaasha cayayaanka ayaa ka maqan timaha waxayna leeyihiin midab aan muuqaal lahayn oo ka soo jeeda asalka caleenta iyo dhirta afkoda, gaar ahaan marka ay "istaagaan" aan dhaqdhaqaaq lahayn lakin, qaadista taayirka.
Baalalladu waxay ku qaataan jiilaalka qarsoodi ah. Ka dib markii kuleylka, balastarku wuxuu bilaabmaa inuu si firfircoon u cuno kelyaha, uuna waxyeeleeyo oo waxyeelo u geysto geedka, halkan erayada labaad ee magaca cayayaanku.
Tani waxay la xidhiidhaa tan xakamaynta cayayaanka waa in si dhab ah loo fuliyaa xilliga ay burooyinkoodu yihiin ubaxyo. Diyaargarowga loogu talagalay ilaalinta canabkana ka soo baxaya burooyinka buro waa cayayaanka isku midka ah sida kiiska ee cayayaanka kale ee dhirta this.
Borer qosol Waa balastar balaadhan oo cawl leh, oo lagu kala saaro midabada geesiga ah ee baalasha hore. Kabaytani waxay qaniinaysaa ukumaheeda dildillaacyada cayayaanka ee cayayaanka ee dhirta. Xilliga xagaaga, hal shakhsi wuxuu ilaa siddeed boqol oo ukumood ah, kaas oo laga helayo gaduud ah oo leh dufaan ur xun (markaa magaca cayayaanka). Wadajir, waxay ku qaniinaan jilicsan ee canab ama dalagyo kale, u diyaari dhaqdhaqaaqa halka joogtana jiilaalka. Ka dib markii kuleylka, shaqsi kasta wuxuu bilaabaa inuu xoqo marinnadiisa gaarka ah ilaa nus mitir caleemaha. Wadajir ahaan, godadkani waxay awoodaan in ay burburiyaan geedka.
Waxqabadka diilinta waxaa laga heli karaa qaybaha dhiman ee jilifka, taas oo ka soo baxaysa isku dar ah ee isku dhafka dhirta iyo cayayaanka dhirta. Marka la eego calaamad noocan oo kale ah, geedka canabka ah waa in la googooyaa aagga hoose ee dillaacana ka saar ama gubi.
Tayada xakamaynta cayayaanka Hab kale ayaa sidoo kale loo isticmaalaa: Istaraatijiyada waxaa lagu ballaariyaa dabeecad ahaan, tusaale ahaan, adigoo isticmaalaya faashad dheer, ka dibna xal cayayaanka ayaa la geliyaa daloolka iyada oo loo marayo siriinjaha, ka dib marka albaabka laga xiro dhoobo.
Grape Zlatkoy waxaa loogu yeeraa cayayaanka cagaaran ee dhexdhexaad ah oo leh jimicsi ballaaran. Waxyeello canab si isku mid ah waxay keeneysaa labadaba cayayaanka qaangaarka ah iyo dirxiga, kaas oo gnaw ku dhex maraan godadka caleemaha, halkaas oo ku haray ilaa guga.
Cayayaanka Tani waxay jecel yihiin dhirta daciifta dhirta caafimaad leh, iyo natiijada saameynteeda, caleemaha canabku wuu engegay, afkeeduna wuu engegay, iyo dhalidda ayaa si weyn hoos loogu dhigaa.
Dagaalka Iyadoo canabkiina zlatkoy waxaa loo fuliyaa si la mid ah cayayaanka kale: caleemaha qulqulaya waa in la gooyaa nudaha nool oo la burburiyo, ka dib markii geedka lagu daweeyo sunta cayayaanka.
Pliers - kuwan waa cayayaanka u eg sida cayayaanka u eg sida noocyo kala duwan. On canab ah caarada parasitic iyo dareemay caarada canab, iyo sidoo kale caarada yurub ah casaan ah.
Dhaqdhaqaaqa muhiimka ah ee cayayaanka arachnoid (cuncun) ayaa horeba u muuqda guga hore, marka caleemaha yaryar waxay sameeyaan dhibco dhalaalaya oo dibedda ah, oo markaa ka dib qalalan, iyo gudaha, caleen ayaa lagu daboolay walax gaar ah oo isku mid ah. Tani waa hoyga saxda ah. Marka cayayaanka sii koraayo, dareemku wuxuu noqonayaa mid madow, ugu dambeyntii waxay ka muuqataa xaashida oo dhan, ka dib markii ay curloogaato oo baaba'do. Xilliga xagaaga, sax ah ayaa soo saari kara ilaa darsin cusub oo daraasad cusub ah, iyo cayayaanka kasta oo cusub, xoqin caleen, nuugaan juuska ka baxa iyo dhajinta dharka.
Haddii cuncunku uu u muuqdo canab, waa inaad la tacaaltaa tallaabooyin adag. halganka, sida jarida geedka canabka ah ee waxyeellada leh ama lagu xoqay canab leh baaruud kolloid ah, "Fitoverm" ama daroogooyinka kale ee ficilka la midka ah.
Dagaalka ka dhanka ah tuubada on canab waa wax aan fiicneyn, maxaa yeelay waa arrin aad u adag in la soo jiido cayayaanka ka mid ah dareemayaasha difaaca. Mashiinka ayaa lagula talinayaa in lagu fuliyo cimilada kulul, ka dibna qiiqa suntan "foori" webka oo burburin cayayaanka.
Ma taqaanaa? Haddii canabku loola dhaqmo cayayaanka Omite cayayaanka si gaar ah loogu talagalay si loola dagaallamo shilinta, noocyada cayayaanka ah ee shilinta ayaa sii wadi doona, ka dibna waxay si xor ah u cuni doonaan inta kale. Tricks Tani waxay si weyn u yareeyn kartaa tirada sunta, iyo mararka qaarkood daaweynta hal mar ayaa ku filan.
Warqadda - cayayaanka dila kara tiro badan oo dalagyo ah. Ka mid ah cadawga ugu weyn ee canab, kuwa ugu khatarta badan ayaa sii kordhaya (waxay cunaan burooyinkooda iyo ubaxyada, iyo sidoo kale berry: way qallalan yihiin ama, liddi ku ah, kallana), bienaalka iyo, dhab ahaantii, Baalallay sabiib ah. Dhammaan cayayaankaas oo kale waxay ku badan yihiin jilif, sidaas darteed habka ugu weyn ee halganka iyaga oo leh iyaga oo ah ka saarista iyo gubista maqaarka jir ah ee geedaha guga hore. Taas ka dib, buufinta waxaa lagu sameeyaa diyaar garow caadi ah dhammaan cayayaanka sabiib ah.
Qorshaha daaweynta Canab waxay kuxirantahay nooca cayayaanka. Sidaas laba aboor ku jira laba sano waxaa lagu burburiyaa saddex jeer (laba toddobaad kadib mid kasta oo ka mid ah labada jiil ee xagaaga ee dhiciska iyo mar saddexaad - laba toddobaad kadib daaweynta labaad).
Thunderbolt waxaa sidoo kale lagu burburiyaa sadax jeer: laba toddobaad kadib xagaaga ugu horeeya ee dhiciska, kaliya ka hor ubax, iyo laba toddobaad ka dib xagaaga jiilka labaad.
Si loola dagaalamo caleen canab laba buufin ayaa ku filan: ka hor iyo ka dib marka uu barar kiciyo. Xilliga jiilaalka, si loo burburiyo cayayaanka, waxaa suurtogal ah in lagu daweeyo duurka, halkaas oo cayayaan hore loo arkay, oo leh awood xoog leh oo Nitrofen ah.
Isla mar ahaantaana, taageerada canabkuna waa la buufinayaa, cayayaanka ayaa sidoo kale lagu dhexdhexaadin karaa. Tijaabadu waa la burburin karaa iyo sunta bayolojiga.
Waa muhiim! Dhamaan dhirta canabka waa in la joojiyaa ugu dambeyn 30 maalmood ka hor inta muuqaalka canabkiisa.
Gooryaanka cirridka ah waa cayayaanka yaryar ee nuugaya dhirta.
Khatar ah canab dixiriga canabka ah ee macaan, Dhab ahaantii, haweenkeedu waa cayayaan casaan ah ama jaale ah, daboolay ubaxyada cad, oo la mid ah bur. Dirxiga ee cayayaankan waxay awoodaan inay sameeyaan deegaannada oo dhan, iyagoo ku degaya laanta iyo caleemaha, nuugaan juuska ka soo baxa iyaga. Natiijo ahaan, canabku waxay noqdaan jaalle oo qalalan. Calaamad muujinaysa boogta ayaa ah calaamad cad oo si fiican loo calaamadeeyay iyo dheecaan joogto ah, ka dibna ay saameeyeen fungus soot.
Cherry on canab waa ka yar halis ah marxaladaha hore ee lesion, tan iyo isaga la dirir waxaa laga yaabaa in farsamo ahaan laga saaro cayayaanka iyo xayawaanka budada leh maro qoyan oo biyo qoyan leh.
Ka dib markaa, waa ku filan in lagu xalliyo canabta leh tincture dabaq ah saddex jeer leh dhexgal toddobaadle ah, kula saydhaa leh toon ama sigaar cabbid, decoction of cyclamen, ama biyo saabuun ah.
Haddii infekshanku uu halis yahay, waa lagama maarmaan in la isticmaalo fitoferm, biotlin, mooshin ama daroogo kale ee koox isku mid ah, haddii loo baahdo, iyaga oo isbarbar dhigaya.
Tallaabooyin ka hortag ah waxay ka caawin kartaa ka hortagga caabuqa. Sidaa darteed, beertii canabka ah waa in la nadiifiyaa, caleemaha la qalajiyey iyo caleemaha waa in la burburiyaa. Intaa waxaa dheer, dhaawaca cayayaanka ayaa sidoo kale laga badbaadin karaa dhaawaca cayayaanka.
Buugan yar yar ee madow oo leh dib-u-dhalaal ah ayaa awood u leh in uu baabi'iyo kumanaan barar ah. Ilaa iyo hal iyo badh qof ayaa waxay ku noolaan karaan hal baadiyaha, iyo tiro isku mid ah oo dirxiga ah waxay ku dhejin karaan hal mitir laba jibbaaran.
Inta lagu jiro maalinta, cayayaanka ayaa ku jira dhulka (waxaa jira cayayaan iyo karkarado), waxay u baxaan habeenkii. Dirxiga wuxuu burburiyaa xididdada sabiibta.
Si loo dilo kuwa lamid ah Canab waxaa lagu buufin karaa Chlorofos, iyo dabagal adag oo la isticmaalo. Cadaabka dabiiciga ah ee duqsigu waa shimbiro, oo ay ku jiraan kuwa beeraha.
Grape thrips - Tani waa cayayaanka nuugaya dareeraha ka soo caleemaha noocyo kala duwan oo canab ah, ka tago baro madow muuqata iyaga oo guga. Socodku maaha mid ka mid ah cayayaanka caadiga ah iyo muuqaalka muuqaalka canabku waa mid aad u yar sababtoo ah isku-darka waxyaabo cayayaan-caafimaad leh.
Xilliga kulaylka, way adag tahay in la ogaado raadinta waxqabad muhiim ah ee gaaban. Leaves muuqaal caafimaad leh, calaamado dibadda ah oo waxyeello ah ayaa maqan. Kaliya gudaha gudaha saxanka caleen waa muuqaalo yar yar ama xumbo leh midab cirro leh.
Haddii aad jarjartey xaashida meel ka mid ah muraayadahan, waxay u muuqataa in taaradu si fudud u koray. Dhab ahaantii, tani waa natiijada dhaawacyada caleenta leh marinnada, taas oo xayiraan saxanka iyo cabitaanka cabitaanka, taas oo ku dhicin cudurro kala duwan oo ay qaadaan.
Caabuqa canabkana leh jaranjaro ayaa mararka qaar jahwareer la leh hawsha cayayaanka caleen. Farqiga dabeecadda waa joogitaanka xayawaanka madaw ee dabiiciga ah ee xirmidda xididdada dhiigga ee qaabka shabakadda. Marka hore, waxay ku arki karaan oo kaliya caleemaha, laakiin sida uu cudurku u socdo, ugxan iyo xayawaan canab ayaa sidoo kale la saameeyaa.
Dhibaatada dhirta dhirbaaxadu waxay liitaa tabar darro iyo deforme, sidaas darteed ka takhalus cayayaan lagama maarmaanka u ah daaweynta guud ee cayayaanka lagu qasi karo fungicides. Moobeyl waa la fuliyaa guga, sida ugu dhakhsaha badan canab ah siin caleemaha yar yar ee ugu horreeya, iyo dib-u-daaweynta sida caadiga ah aan loo baahnayn.
Abheedhkan microscopic wuxuu u muuqday beeraha beeraleyda dhowaan, aan ka badneyn hal iyo badh boqol sano ka hor. Waxay quudisaa oo keliya canab, mana khatar ku tahay dalagyada kale. Isla mar ahaantaana, sida laga soo xigtay fikradda guud ahaan la aqbalo, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay halista ugu weyn uguna adag ee beerashada beeraha canabka ah, oo leh xawaaraha shidaalka garaacaya meelo waaweyn.
Ma taqaanaa? Muddo gaaban oo waqti gaaban, Phylloxera waxay burburisay in ka badan saddex daloolow laba beerood oo beero canab ah dunida oo dhan.
In canab, phylloxera waxay isticmaashaa wax kasta: laga bilaabo xididdada ilaa talooyinka caleemaha, iyo qayb kasta oo ka mid ah warshadda ayaa leh "taageerayaal" u gaar ah cayayaanka. Tusaale ahaan, phylloxera waxaa lagu matalaa noocyada noocyada sida rootiga (tan ugu khatarta badan), caleen, kanadiska, xubnaha taranka, iwm. Waddanka reer cayayaanku waa Waqooyiga Ameerika, waana noocyada canabka ah ee Maraykanku ku badan yahay dadka kale ee ay u nugul yihiin inay saameyn ku yeeshaan cayayaankan, waxay sidoo kale yihiin garoomada ugu weyn.
Si ka duwan Maraykanka, noocyada canabka ah ee Yurub ee phylloxera waxay bilaabaan inay cunaan xididada, si kastaba ha ahaatee, haddii aysan soo dhexgalin waqtigooda, waxay si dhakhso ah u dhaqaaqaan qeybaha sare ee geedka, kuwaas oo markaa dhamaadka xagaaga ay mar kale hoos ugu dhacdo xididada, qaadashada qaab xidid, ama Dabayshu waxay ku faaftaa meelo waaweyn).
Intaa waxaa dheer, cayayaanku wuxuu ka soo baxayaa warshad si loo abuuro qalab, gacmo aadanaha, iyada oo la adeegsanayo xayawaanka iyo shimbiraha, iyo sidoo kale la dhaqo tuubada.
Sida ugu fiican ee looga hortagi karo caabuqa phylloxera - Sii dooro noocyo canab ah oo yurub ah oo ku kora ciidda, sida cayayaanku dareemayaan gaar ahaan carrada qoyan.
Wixii faahfaahin ah Canab waxaa sidoo kale laga tallaalayaa noocyo kala duwan oo u adkeysanaya cayayaankan oo aan ka baqaynin lakin: kiiskan, marka rootstock uu ku dhaco phylloxera, qaybta sare ee canabku wax yar waxyeello.
Haddii canabku weli ay saameeyaan cayayaanku, warshad waa la buufinayaa "Aktellikom", "Zolon", "Confidor", "Mitakom" ama cayayaanka kale. Daaweynta asaasiga ah ayaa la sameeyaa markii labo baaluq oo ka muuqda boogta, badiyaa qeybta hore ee bisha May. Mashiinka labaad ayaa la sameeyaa dhamaadka bisha Maajo, waxaana daaweyntii ugu dambeysay la qabtey illaa dhammaadka Juun.
Kuwani waa cayayaan yaryar-nuugista jilicsan yihiin khatarta beerta canabka ah iyo qaangaadhka, iyo qaabka dirxiga. Waxay u guuraan canab ka dhirta kale marka caleemaha ka muuqanayaan geedka canabka ah (waxaad arki kartaa cayayaanka leh indhaha qaawan adigoo ruxaya geedka canabka ah).
On caleemaha saameysey ee fuuq-baxa, dariiqyada waxay bilaabaan inay curl iyo foomka waa la lumay, iyo ka fikiraya in cayayaanka ay dhigaan dirxiga dhabarka caleen, waa wax aad u adag in la ogaado iyaga.
Si taxadar leh u baadhitaanka xaashida, dhejisyada yaryar waxaa laga arki karaa dhinaca dambe, kaas oo dirxiga ah ee sigaarku ay ku kala duwan yihiin marxaladaha ugu dambeeya ee koriinka.
Si loola dagaalamo iyadoo la isticmaalayo cayayaankan laba jeer oo lagu buufin karo oo canab ah, oo leh fasax 10 maalmood ah. Waa in la xasuusto in cunnadu ay tahay baqshiish boodbood, sidaas darteed si sahal ah ayay u gudbi kartaa baadiyaha kale.
Miisaanka waxay quudiyaan oo carruurtooda ay ku quudiyaan canabkiinna bisil, taas oo keenta waxyeelo weyn oo soo saarta dalagga. Berry caleemaha, cayayaanka ayaa abuuraya xaalado aad u fiican cudurka bakteeriyada iyo fungi, si firfircoon ugu kobcaya miro soo gaadhay.
Dagaal-yahanka waxaad u baahan tahay inaad ka bilawdo dhamaadka guga, marka ay ka soo wareegaan cunista borotiinka si macaan. Waxaa jira noocyo badan oo ah halgankan: ku dabooli karaa hilibka digaaga ama hilibka, ku buufinta canabkiisa nooc kasta oo kiimiko ah oo lagu xakamayn karo kiimikooyinka ama burburinta hoolka, kuwaas oo si sahlan loo heli karo raadinta halka uu ceelku ku duulo subaxa iyo halka ay ku soo noqdaan fiidkii. Tani waa sida ugu fiican ee loo sameeyo ka dib qorrax dhaca, ka dib markaad naftaada ka ilaaliso qaniinyada suurtogalka ah.
Habka ugu wax ku oolka ah waxaa weeye in lagu daboolo dabinka ka yimaada gasacadaha ama dhalooyinka. Samaynta godadka yaryar, buuxi macmacaanka leh macaanka ama sharoobada, qaar waxay ku shubaan sumowga macaan. Duufaanku waxay u duulaan oo ku fariistaan ​​dareeraha, kuna dhajiyaan. Waxa kale oo aad xiri kartaa canabkiina shabaqa, taas oo xiritaanka cayayaanka la heli karo.
Waa muhiim! Geeluhu waxay ku nool yihiin qoysas ballaadhan, oo buulahooduna waxay ku yaalliin meel 20 mitir ka mid ah, sidaas awgeed burburkii buulkeedii ayaa laga yaabaa gebi ahaanba kuma aadi doono dhibaatadan. Dhibaatadu waa inay sii socotaa qaabab kala duwan, ilaa ay cayayaanka u helaan meel kale oo raaxo leh.
Kahortagga Cayayaanka iyo Ilaalinta
Canabku waxay leeyihiin tiro badan oo cayayaanka, marka lagu daro kuwa kor ku xusan. Dagaalka ka soo horjeeda waxay noqon kartaa mid waxtar leh, laakiin waa mid aad u fiican oo waxtar leh si looga hortago faddarada iyadoo la adeegsanaayo daaweynta ka hortagga ah ee warshadda iyo ilaalinta dhammaan xaaladaha beerashada.
Beeralay badan ayaa aaminsan in ballanqaadka beerta canabka ah ee caafimaadka qabta ay tahay farsamaynta kiimikada ee geedka canabka ah, xitaa kuwa ka mid ah noocyada loo arko inay u adkeysanayaan cayayaanka. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan loo eegin in ay oggolaato daaweyn noocaas ah ama aan ka hor, dhirta uu jiran yahay, waa lagama maarmaan in beerta canabka ah ay nadiif ahaato, si taxaddar leh oo joogto ah u baaraan caleemaha si loo ogaado raadinta ugu horeysa ee lesionka.
Caleemaha cawska ah iyo xididdada la qalajiyey waa in si deg deg ah loo burburiyaa, isla markaa ay ka baxaan iyo caleemo dhacday. Tallaabooyinka noocan oo kale ah waxay u oggolaanayaan in ay iska ilaaliyaan kharashaadka iyo dadaallada aan loo baahnayn, iyo sidoo kale inay bixiyaan dalagyo badan oo canab ah iyada oo aan loo adeegsan kiimikooyinka aan bini'aadamka u aheyn nabadgelyo.